पर्वतको बिकासका लागि यूएईको भेला अवसर : भुर्तेल
अन्तराष्टिय पर्वत समाजले फेब्रवरी २८ गतेदेखी मार्च १ गतेसम्म दुवईमा बृहत भेलाको आयोजना गरेको छ । ‘आजको आबस्यकता ,प्रबासी प्रबतेलीहरुको एकता र समुन्नत समाज ,सम्वृद्धि पर्बत निर्माण हाम्रो अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना गरेको कार्यक्रममा संसारभरि छरिएर रहेका पर्वतेहरुको उपस्थिती हुने छन् । कार्यक्रममा पर्वतवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी,विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल एवम् बौद्धिक व्यक्तिहरुको सहभागिता रहने छन् । कार्यक्रमको विषयमा हामीले अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजका सचिव मणि भुर्तेल सँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।
यहाँहरुले दुवईमा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमको विषयमा बताईदिनुहोस् न ?
धन्यवाद भाई, हामीले फेब्रवरी २८ गतेदेखी मार्च १ गतेसम्म दुवईमा बृहत भेलाको आयोजना गरेका छौँ । ‘आजको आबस्यकता ,प्रबासी पर्वतेलीहरुको एकता र समुन्नत समाज ,सम्वृद्धि पर्बत निर्माण हाम्रो अभियान’ भन्ने मुलनाराका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा समृद्ध पर्बत निर्माण अभियानमा प्रवासी पर्वतेहरुको भूमिका, नेपाल सरकार र स्थानिय सरकारको दायित्व एब कर्तब्य माथि छलफल हुनेछ ।कार्यक्रममा विश्वभरि छरिएर रहेका पर्बतेलीको अवस्था, मध्यपूर्वमा रहेका पर्वतेली वा नेपालीहरुको समस्या र निराकरण पहलमा नेपाल सरकार एवम् मानवियता अनुसार सस्थाको भूमिका, सस्थाले एक बर्षमा गरेका कामको समिक्षा,सस्थाले आगामी बर्षका लागि गर्ने कार्यको कार्य तर्जुमा, वैदेशिक रोजगारमा रहेका पर्वतेका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा कृषि एवम् पर्यटन मा सामुहिक लगानी र अवसर, महिला कामदारको श्रमस्वीकृती तथा पुन श्रम स्वीकृती अल्झन नराख्न नेपाल सरकार सँग पहल गर्ने, पर्बत जिल्लाभरि मेडिकल इन्स्योरेन्सको ब्यबस्था गर्न पहल गर्ने र सेप्टेम्वर वा अक्टोवरमा नेपाल हुन गैरहेको विश्व सम्मेलनको तयारीको विषयमा छलफल गरिने छ ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यले के हो ?
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै छलफलको विषयले प्रष्ट पारेको छ । हामी प्रदेशमा रहेका पर्वतेले यो अभियानलाई सार्थकता तुल्याउन नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारको भूमिकामा निर्भर रहन्छ । सोही अनुसार हामीले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधी, व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधी, सामजिक अभियान्त सहितका व्यक्तिलाई छलफलमा डाँकेका छौँ । कार्यक्रममा हामी घोषणपत्र जाहेर गर्ने छौँ र कार्यान्वयनका लागि सवै व्यक्तिसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने छौँ ।
पर्वत जिल्लाको विकासमा यो कार्यक्रमले के फाईदा पुग्छ ?
कार्यक्रमले पर्वत जिल्लाको विकासमा धेरै फाईदा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । ‘बुज्नेलाई श्रृखण्ड न बुज्नेलाइ खुर्पाको बिड’ भने झैँ यो अभियानलाई सार्थकता बनाउन स्थानिय सरकार लाग्यो भने धेरै फाइदा छ । दुबई ,कतार ,मलेसिया देश बनाउन सक्ने नेपालीले पर्वत जिल्लालाई समृद्धि बनाउन सक्छन भन्नेमा दुइ मत छैन । जसरि प्रदेशी पर्बतेलीले जिल्लाको विकासमा इच्छाशक्ति देखाएका छन् त्यसरी नै नेपाल सरकार र स्थानिय सरकारले इच्छाको देखाए भने, यो कार्यक्रमले पर्वत जिल्लाको विकास र समृद्धिमा निकै महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
कार्यक्रममा दुबईमा रहेका पर्वते युवाहरुको कत्तिको सहभागी हुन्छन् ?
हामी कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न गराउन निकै कसरत गरेका छौँ । साथीहरु प्नि खट्नु भएको छ । कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन सहभागिताको निकै आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि हामीले कार्यक्रममा धेरै भन्दा धेरै पर्वतेहरुलाई उतार्ने कोशिस गरेका छौँ । यूएईमा सात प्रान्त छन् । यो कार्यक्रम नेपालीको हव भएको ठाउँ दुवई सहरमा हुँदै छ । हामीले सामजिक सञ्जाल, पत्रचार एवम् टेलिफोन मार्फत सवै गाउँपालिका जनप्रतिनिधीहरलाई खवर गरेका छौँ । आशा छ । कार्यक्रममा धेरै पर्वतेहरको उपस्थिती हुने छ । म यसै अन्तरवार्ता मार्फत पनि दुवईमा रहेका पर्वते युवा लगायत अन्य व्यक्तिहरुलाई निमन्त्रणा गर्न चाहान्छु ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियस्तरका कलाकार लगायत थुपै अतिथि बोलाउनु भएको छ खर्च कसरी ब्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
सवैभन्दा पहिले हरेक काममा इच्छाशक्ति अनिवार्य छ । हामीले पनि इच्छाशत्ति जागेकै कारण कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुँ । हामीले हाम्रा पर्वते कलाकारलाई अन्तराष्ट्रिय बजार क्षेत्रमा ल्याउन लागेका छौँ । पर्वत जिल्लाको समृद्धिमा उहाँहरुको पनि भूमिका छ । कलाकार खुशी भएर आउँदै हुनुहुन्छ । कार्यक्रममा राष्ट्रियस्तरमा ख्यातीप्राप्त गायक बिमलराज क्षेत्री, कुलेन्द्र वि.क, कृष्ण समिप सुबेदी र उदयमान कलाकार सुस्मा लोहनी आउदै हुनुहुन्छ । त्यस्तै अन्तरास्ट्रिय पर्बत समाजका सदस्य सस्था ९ र प्रतिनिधि सस्था १४ गरि २३ देशका पवतेहरुको कार्यक्रममा उपस्थिती रहने छ । संस्थाका केन्द्रिय संरक्षक ,सल्लाहकार र केन्द्रिय समितिको बोडी उपस्थिति रहने छ । त्यस्तै नेपालबाट जनप्रतिनिधी, व्यवसायी, पत्रकार लगायत पञ्चासे परियोजनाको टिम समेत आउने भएको छ । अतिथी पाहुनाहरुको भिसा प्रक्रिया सबै सकिएको छ । अब टिकटको प्रक्रिया बाँकि छ । बस्नको लागि हामीले होटलको ब्यबस्था गरिसकेका छौँ । हाम्रो सम्पुर्ण टिम अतिथीहरुको स्वागत सत्कारका लागि आतुर छौँ । हाम्रो कार्यक्रमले पर्वतको समृद्धि र विकासको अभियानमा इट्टा थप्ने छ, हामी विश्वास्त छौँ ।
अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजका आगमी कार्ययोजना के के छन् ??
यो विशुद्ध सामजिक संस्था हो । यो संस्थाका स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै पर्वतको समृद्धि र विकासमा टेवा पु¥याउने हो । हामीले च्यारीटि सो मार्फत संकलन गरेको रकमवाट पर्वत जिल्लामा प्रसुति गृह बनाउने निर्णय गरेका छौँ । दुवईको कार्यक्रमवाट कुन गाउँपालिकामा निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने छ । त्यस्तै हामीले जलजला गाउँपालिकाका पहिरो पीडितलाई भवन बनाउँदै छौँ । लगायत अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजले जिल्लाको विकासमा धेरै काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार (जिल्ला )
पर्वत समाज जापानद्धारा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न 53
अन्तरष्ट्रिय पर्वत समाजको दोस्रो अधिवेशन हुवासमा हुने 124
पर्वतमा बिराट गुप्तेश्वर महायज्ञ शुरु : धर्म र जातिका नाममा बिभेद अन्त्य गर्नुपर्छ–अध्यक्ष तिमिल्सिना 57
शालिग्राम शिलालाई आज कुश्माबजारमा रथयात्रा गराईदै 80
फलेवासमा आयोजित मेयर कपको भव्य उद्घाटन, हेर्नुस फोटोमा 423
फलेवासमा मेयर कप हुँदै 200
कतारवाट फर्केर गाउँमै चाउमिन उद्योग 69
पञ्चासे केवुलकार देशकै समृद्धिको आधार 323
प्रहरी कार्यालय नजिकै चोरी 107
कुश्मामा भएको स्वास्थ्य शिविरमा ४ सय बिरामीको निःशुल्क उपचार 62
सम्बन्धित समाचार ( अन्तर्वार्ता)
जन्मभुमि प्रतिको कर्तव्यलाई कसैले नभुलौँ : नरवहादुर रोका 826
पर्वतको बिकासका लागि यूएईको भेला अवसर : भुर्तेल 821
‘सालको पातको टपरी’ बोलको गित सुपर हिट हुनुका कारण कुलेन्द्रले खोले 430
जीन्दगीनै समाजसेवाका लागि सुम्पेको छु । 432
हामी पर्वतको विकासमा हातेमालो गर्ने अभियानमा छौँ । 499
अमेरिकामा रहेका पर्बतेलीलाइ एकजुट गर्न लागिरहेका छौ 2971
हाम्रो लोकसंगीतलाइ संसारभर चिनाउन छ 1795
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको जीवन - दुई बिहे गर्नु मेरो जिन्दगीको भूल 730
नेपाल टप अञ्जलीको डाक्टर बन्ने सपना 957
प्रधान संपादक: Bharat Paudyal
Parbat Nepal © 2019